कञ्चनपुरका किसान उखु खेतीमा लोभिए - Pahilo News
०५ चैत २०७४, सोमबार
कञ्चनपुरका किसान उखु खेतीमा लोभिए
२६ पुस । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा उखुखेती फस्टाउँदै गएको छ ।जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका किसान उखुखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन् । दोब्बर आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान उखुखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेल्डाँडी, बैवाह, झिलमिला, खैरिघाट, भुडा, कलकत्ता, बेलौरी, पुनर्वास र शंकरपुरका सयौँ किसान अन्य खेती लगाउन छोडेर उखुखेती गरिरहेका छन् ।
नौ वर्षदेखि उखु खेती गर्दै आएका बेल्डाँडी गाउँपालिकाका मानबहादुर चौधरीले अन्य बालीनाली भन्दा उखुबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकेको बताए । “उखुखेती एक पटक र धान, गहुँ खेती पाँच पटक गर्नु एउटै हो”, उनले भन्नुभयो, “नगदे बालीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ ।”
केही वर्षयता आफ्नै घरमा समेत गुड उत्पादन गरिरहेका चौधरी दैनिक तीन क्विन्टलसम्म गुड उत्पादन गर्दै आएको बताए । गुड प्रतिकिलो रु ५५ का दरले बिक्री भइरहेको छ । उनले १० बिगाहमा उखुखेती गरेका छन् ।
उखुखेतीबाट ६ महिनामा रु २० लाखदेखि रु २४ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको किसान बताउँछन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख देवीदत्त कलौनीले पछिल्लो समय जिल्लामा उखुखेती फस्टाएको बताए । “कञ्चनपुरमा सात प्रतिशतले उखुखेती बढेको छ”, उनले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरमा चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि किसान थप उत्साहित भएका छन् ।”
क्यासिनोहरुले नतिर्दा डेढ अर्ब राजस्व अन्योलमा
केही क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा लामो समयदेखि सञ्चालित छन् भने तिनले तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत..
किन तोकिएन धानको समर्थन मूल्य ?
विगत वर्षहरुमा कृषि विकास मन्त्रालयले उत्पादक र व्यापारीलाई हित हुने गरी धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएक..
अरुण चौथोबाट वञ्चित चिलिमेलाई बुढीगण्डकी र सेती
केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय २० मेघावाट क्षमताको गोरखाको बुढीगण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना र १ सय..
तीन किसिमका हुन्छन् लगानीकर्ता
उनी लेख्छन्, ‘एकजना अमेरिकी सल्लाहकार गार केलिनले आफ्नो रिसर्चमा पाए कि, नर्स, फायर फाइटर र अन्य पेशेवर, जो आफ..
नैतिकता हुनेहरुले आफूमाथि आरोप लाग्दा राजीनामा दिएका उदाहरण छन्ः विश्वकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
र्ना गर्ने बेलामा आफ्ना हनुमानदासहरु भर्ना गर्ने अनि खोज्ने बेलामा चाहिँ राजनीतिक दलहरु..
मुलुकलाई राजनीतिक संकटतिर धकेल्न सरकार क्रियाशील देखिन्छः प्रदीप ज्ञवाली
एउटा पार्टीका सांसद कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञको नाम लिँदै भन्छन्, वाम एकता नफुटाउँदासम्म ..
पार्टीले निर्णय नगर्दै मुख्यमन्त्री मै हुँ भनेर हिँड्न सुहाउँदैन
अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले) ० निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक डेडलक उस्तै छ, क..
उपत्यकामै ढुंगाले हानेर व्यवसायीको हत्या
माटो व्यवसायी चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथली बस्ने ५५ वर्षीय सीताराम सैंजूको हत्या भएको ..
पदमा रहेकै बेला पदपूर्ति समिति गठन ?
मन्त्री देवले भने रिक्त रहेको तीन बोर्ड सदस्यमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्न ..
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अहिलेको एकता बाहिर ‘सरप्राइज’ लागे पनि लामो समयदेखिक..
केही क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा लामो समयदेखि सञ्चालित छन् भने तिनले ..
भाँजो हाले हामी आफै सरकार बनाउँछौः एमाले उपाध्यक्ष गौतम
नेता गौतमले भने, ‘नयाँ सरकार बन्न नदिए बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनले संविधानको अधिकार प्र..